TinEye ~ Reverse Image Search Engine | My Burmese Blog
TinEye ~ Reverse Image Search Engine	On January 4, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Web 2.0	TinEye ဆိုတာက Reverse Image Search ပါ။ ဒီ Search က အခြား Google Image search လိုမျိုးတွေနဲ့ ဘာကွာလဲဆိုတာ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် မိတ်ဆွေမှာ ဓာတ်ပုံ150×150 ဆိုဒ်ပုံလေးရှိတယ် အဲဒီပုံကိုပဲ အကြီးကြီးလိုချင်တယ် အဲဒီပုံတင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ကို မမှတ်မိတော့လို့ ပြန်ရှာချင်တဲ့ဆိုရင် အသုံးဝင်လာပါပြီ။ သူမှာ ဓာတ်ပုံဖိုင် upload လုပ်လို့ရပြီး အဲဒီ TinEye ကနေပဲ ပုံတူတွေ၊ ခပ်ဆင်ဆင်တူတွေကို ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံမတင်နိုင်တောင် url ထည့်ပြီးလဲ ရှာလို့ရပါသေးတယ်။ တစ်နေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ Wikipedia logo မှာ မြန်မာစာပါတယ်ဆိုတာ တင်တုန်းကဆို ကွျန်တော် အဲဒီ လိမေ္မာ်ရောင် လိုဂိုပုံသေးလေးပဲရှိပြီး မူရင်းဆိုဒ်ကို မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်မှာလဲ ဖတ်တဲ့သူ ကလစ်နှိပ်တာ မနှိပ်တာ အပထား မူရင်းဆိုဒ်ကိုလဲ ညွှန်းချင်သေးတာနဲ့ TinEye မှာ သွားရှာပြီး မူရင်းဆိုဒ်ကို ပြန်တွေ့ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်က Reverse Image search ဆိုတော့ အဲဒီလိုပုံရှာရုံတင် မဟုတ်ပဲ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရိုက်၊ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ဘယ်သူတွေ ယူသုံးနေတယ်ကိုပါ စစ်လို့ရတာပေါ့။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တော့ အသုံးဝင်မှာပါ။ စမ်းကြည့်ပြီးရင်လဲ ကြိုက်သွားမှာပါလို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။ SE, Web, Web 2.0	One Comment	konavy
အကိုေရ ဖတ္လို႔မရဘူးဗ်…uniinnwa,myanmar3 ထည့္ထားတာကိုမရတာ…တစ္ခ်ိဳ႔ဆိုဒ္ ေတြေတာ့ဖတ္လို႔ရသြားတယ္……unicode ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိလဲမသိဘူး….အကုန္ထည့္ထားရမွာလား…… unicode နဲ႔ရိုက္ရင္ အကိုေရ ကို ‘အကိုရေ” လို႔ျဖစ္ေနတယ္…ေျပာင္းသံုးခ်င္တယ္..ကူညီပါအံုး….firefox setting ပါေျပာျပေပးပါ…
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=5+7Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts